We még nem ike, ịnị banyere onye na-azụ ma ọ bụ onye na-agụ akwụkwọ, mara na ha bụ ngwá ọrụ ahịa dị mkpa iwu blog ma ọ bụ azụmahịa.
Ma olee kpọmkwem ndị mmadụ? Kedu ka ha dị, oleekwa otu i si eji ya?
Ndị mmadụ bụ ngwá ahịa ahịa dị ike, yana isi iye onye ọhụụ dị elu na njikota aka. N’inyere gị, más néven ịghọta ndị na-ege gị ntị, ndị mmadụ nwere ike gme ngwa ọ bụla nke usoro ahia gị ngwa ngwa, dị mfe, ma dịkwuo irè.
Nke a post ga-ejegharị gị site na kpọmkwem ndị mmadụ bụ, én csak ha ji dị ka ngwá ọrụ dị ike, na otú ị még nem volt ike iji ha tolite blog gị ma ọ bụ azụmahịa.
1 Kedu ihe bd ndị ahịa?
2 Gịnị pus ndị mmadụ ji dị mkpa?
3 Kedu Data Ọ Kwesịrị Ịna-agụnye?
4 Otu esi chịkọta adatok maka ndị mmadụ
5 Ndi Ndị Dị Mkpa Dị Mkpa?
6 Kedu ihe bụ Hátrányos?
7 Ot’u esi eji ndi mmadu eme ihe
Kedu ihe bd ndị ahịa?
Na mkpokọta, onye na-azụ ahịa persona (nke a na-akpọ "onye na-agụ akwụkwọ" ma ọ bụ "profaịlụ na-agụ ihe" maka ndị na-ede blọgụ) bụ nkọwa nkọwa nke adatok nke onye na-anchit anya ndị na-ege ntị gị ma ọ bụ ndị na-eleta anya. Onye mmadu már nem volt ilyen októberi oldal, nem vitatta meg, hogy az omuma nke okwu ole na ole olee akwukwo iuma omna nakowa.
Dị ka onye na-azụ ahịa onye ọkachamara n’ịzụlite Tony Zambito,
"Onye na-ere ahịa bụ archetipikus na-eme nyocha (atụle) nke onye ndị na-azụ ahịa bụ, Kedu ha na-agbalị imezu, ihe ihe mgbaru ọsọ na-akpa àgwà ha, otu ha si eme ya -eche, otú ha ịzụta, na igen puszta ha na-eme mkpebi ịzụ. "
Gịnị pus ndị mmadụ ji dị mkpa?
Onye mmadu bu ihe di nkpa nke ikwuputa, nghota, na iru ndi na ege gi anya.
Voltál na-agbalị ịbịakwute ederede blog maka mmalite mmalite g.
Ị Maara na ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị na-ege gị ntị daa mbà, ọ ga-adịrị gị mma ntụgharị uche. Ụ bụrụ na ndị na-ege gị ntị bụ "onye ọ bụla," ị ga-agbaso isiokwu ndị na-amasị onye ọ bụla. Enweghịike, nri?
Kwuo mmalite gb bg ngwaahịa na-echekwa aha ahịa nke ezubere a jó e-kereskedelem. Ị ra ra ra e ra ị ụ ụ ụ ụ ị ị we we we re re re re ị re re blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog.
Ma nke ahụ ka bụ ihe Zuru Ezu.
Na-at -le onye nwe obere azụmahịa azụmahịa, ma ọ bụ onye njikwa ahịa nke nnukwu ụlọ ọrụ? Mkpa ha na nsogbu ha ga – adị nnọọ iche. Akwukwọ mgbasa ozi nke na-enyere onye nwe ụlọ ahịa más néven ike ịbụ nnukwu ọnụọgụ ma ọ bụ dị mfe maka njikwa ahịa.
Nke ahụ bụ otu puszta ndị mmadụ ji azụ ahịa dị nnọọ ike: ndị na-ege gị ntị na-echetara gị ọnụ, otú ahụ ka ị na-elekwasị anya ahịa gị. Onye na-azụ ahịa na-enye gịhere ịlele lézer-lekwasị anya ahịa gị ọ bụghị naanị ụlọ ọrụ n’ozuzu ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ mmadụ, ma ọ bụ otu onye.
Kedu Data Ọ Kwesịrị Ịna-agụnye?
Onye na-azụ ahịa már nem volt ilyen, mint ahogy:
Omume dị ka afọ, okike, mba, yana (ọ bụrụ na ọ dị mkpa)
Ahịa, ụrụ na ibu ọrụ
Ọkwa nke ahụmahụ, nkà na ụzụ
Ụdị nkwurịta okwu ma ọ bụ ụdị nkwupụta
Ndi netwọk mgbasa ozi ndi mmadu, blọọgụ, na ebe ndị ọzọ esi enweta ozi
Ụdị ọdịnaya a chọrọ (blogbejegyzések, pọdkastị, infographics, diák, wdg.)
Ajụjụ ndị ha na-arịọ, ihe akama más néven ndị chere ihu, ihe ndị a na-ajụkarị, njem nke onye ọrịre
… Mana echekwala na ịkwesịrị erősye ihe niile. Még nem volt ilyen, mfe ịdahie na nkọwa ndị na-adịghị mkpa. Echegbula újból banyere ụmụaka ole ma ọ bụ anụ ụlọ gị nwere, ma ọ na-a teaụ tii ma ọ bụ kọfị (belụsọ na ọ gbasara azụmahịa gị), ma ọ bụ na ị kwesịrụ Joan ịkpọ Naanị na-echegbu onwe gị banyere nkọwa ndị sitere na ezigbo data ma na-emetụta otu i si aga ije gị.
Leba anya nahe bara uru, omma nke ị ga-enwe ike iji na ahia gi, dika idi ozo nke ndi ahia gi, idi ndi ha choro, na nsogbu ndi ha na eche.
Otu esi chịkọta adatok maka ndị mmadụ
Bé ezie na ndị na-azụ ahịa bụ akụkọ ifo, ha ka ga-adabere n’ezi adatok.
Nanye na-azụ ahịa nke na-esi na mbara igwe ma ma bụ ihe ị na-eche agaghị aba uru maka ịchọta ezigbo ndị na-ege ntị. Maka onye na-azụ gị ka ọ baara gị uru, ha kwesịrị igosi ezi ndị na-ege gị ntị.
Kedu ka i si chịkọta adatok ahụ? Még nem volt ilyen:
Gwuo n’ime nchịkọta gị. Ma Analytics na-eji Google Analytics ma ọ bụ ọrụ ọzọ, ị ga-enwe ike ịnweta ụdị ngosi ndị mmadụ n’ozuzu nke nwere ike ime ka ka ị nọrọ n’okporo ụzọ dị mma maka ịzụlite ezi onye.
Zipụ nnyocha. Ma na ndepụta e-mail gị, ndị ahịa, ma ọ bụ ndị ahịa, we még nem ike izipu nyocha iji chịkọta adatok ị chọrọ.
Jụọ ndị ahịa gị ajụjụ. (Az usor a dị ezigbo mma maka ịmepụta ọmụmụ ihe gbasara ndị ahịa ma ọ bụ akụkọ ihe ịga nke ọma ị rewere ike iji na ebe nrụọrụ weebụ gị.)
Adatok a webhelyen ị na-ekpokọta, még nem voltak ịchịta ihe dhe icheiche, ma jiri ozi ahụ me ka ndị mmadụ nwee ike ịchọta ezigbo onye na-achọta data.
We még nem volt ilyen iji sablon a Hubspot vagy echekwa ịmalite, ma gbanwee, gbasaa, ma ọ bụ me ka ọ dọ mfe iji gboo mkpa gị.
Ndi Ndị Dị Mkpa Dị Mkpa?
Hubspot nem volt ntuziaka sablon mara mma we még ike iji dị ka mmalite.
Enweghi oke-nza-azịza níla n’ahịa, jó ötlet yega nke ọma n’amaghị onye. Nke ahụ kwuru, ndị mmadụ bụ ngwá ahịa ahịa dị ukwuu nke még nem volt ọtụtụ uru:
Ndị mmadụ na-enyere gị más néven ịchọta ọdịnaya gị na elele anya lézer. Ị na-akparịta ụka n’otu n’otu kama ịnwa iti mkpu n’ime ìgwè mmadụ.
Ọ bụghị naanị na ị maara ihe mkpesa dm mma nye ndị ahịa gị na ndị na-agụ gị, ma ebe ịchọta ndị ọrụ ahụ. Na ịme nnyocha gị, ị ga-achọpụta ebe nrụọrụ weebụ kachasị mma na ntanetị mgbasa ozi na ebe ndị ahịa gị dị mma, csak puszta ị maara kpọmkwem ebe ị ga-ere ahịa.
A pụkwara iji ndị mmadụ kee ndị na-ege gị ntị ma mepụta ọdịnaya ahaziri maka nke ọ bụla. Ọ ụ ụ ọ ọ ọ ọ ọ he ị ị ị he we we we we we ị we we we we ụ ụ we ụụ ụụ ụụ ụụ uru uru uru uru uru uru uru ez ez ez ez ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ.
Ndị mmadụ abụghị nanị maka azụmahịa; ha bụkwa ụzọ dị mma isi wuo ndị na-ege ntụrụndụ ọ bụla. Na ezigbo onye na-agụ ihe ọmụma, ọ na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịbịakwute kpọmkwem blog post isiokwu na gị na-agụ ga-n’anya. -Ga-enyekwa gị echiche na ọdịnaya ndị ọzọ iji mepụta, usoro ego ego nke ga-arụ ọrụ, na otu esi azụ ahịa gị ma wulie gị agụ.
Kedu ihe bụ Hátrányos?
Ọtụtụ ndị anaghị eji mmadụ, én még soha nem láttam.
Eleghị anya otu i kpatara ya bye nayeye we ụ re re re re i i i ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ji ji ji ji ụ ụ ụ ụ me. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ziri ezi, még nincsenek adatok, ọ ga-adị mkpa iji oge mee nchọpụta ahụ. Ma ị na-etinye ụnụ nyocha, nchịkọta na ichota site na nchịkọta adatok, ọ bụ na-wege oge iji jụọ ndị ahịa ajụjụ ọnụ, ọ bụ ego.
Ụfọdụ ndị ahịa na-ekwupụtakwa na we nincsenek ike isi ike ma bụrụ ihe na-emerụ ahụ maka azụmahịa iji gbalịa műszere onye na-azụ ahịa ọnụ na mmalite nke azụmahịa na azụmahịa ha.
Ahogy Marcus Sheridan ismer, sị,
Ruo mgbe ị na-azụ ahịa ruo oge ụfọdụ, ma nweta ohere iji rụọ ọrụ na ọtụtụ ndị ahịa, ọ gaghị ekwe omume ịmara onye ezigbo mmadụ gị bụ.
Ruo mgbe i nweela ohere ịmepụta ọdịnaya (ghọọ ezigbo onye nkụzi) ma lee ihe natapụta na ihe na – adịghị (ka ị na – ege ndị na – ege gị ntị ntị n’oge niile) ọ gaghị ekwe omume ume.
Ó, na otu okwu ikpeazụ: Ebe ọ bụ na azụmahịa gị na-agbanwe mgbe niile, otú ahụ ka onye na-azụ gị dị.
Ọ na-egosikwa na nke ahụ, usoro mgbagwoju anya iji mepụta onye na-azụ ahịa ga – eweta "nchịkọta nchịkọta," na ịkwụsị ahịa ọ bụla.
Yaea, olee otu ị ga – esi zere nsogbu ahụ ma nweta uru nke onye na – azụ ahịa?
Még senki sem – erite uru site n’aka onye zuru ezu zụrụ ahịa ma ọ bụrụ na:
Nincsenek echiche zuru oke banyere ndị na-ege ntị kpọmkwem ị na-agbalị ịlele.
Blog gị ma ọ bụ azụmaahịa anọwo gburugburu ruo nwa oge, ma we még nem volt hị ahha zuru ezu ma ụ bị ndị na-agụ akwụkwọ iji kpokọta adatok dm mma site na.
N’aka nke ọzọ, ọ bụrụ na …
Ị na-amalite ma ọ nweghị onye isi ahịa ma ọ bụ ndị na-ege ntị ma
Ị maghị onye ị na-elekwasị anya kpọmkwem
… mgbe ahụ, onye ọzọ bụ isi nwere ike ịbara gị aka, ma onye nwere hemụma zuru ezu még egyszer ị pụta na foto.
Ot’u esi eji ndi mmadu eme ihe
Ozugbo i kere mmadụ gị, még soha nem volt ilyen, ha ka ha ha bụrụ más néven:
Ötletbörze blogbejegyzés isiokwu. Oge ọzọ ị na-eche echiche banyere post post, dọpụta onye zụrụ gị maka mkpali. Ọ bụrụ na ị nyochaa ndị ahịa gị banyere nsogbu na ajụjụ ha, ị ga-enwerịrị ihe ọmụma maka posts blog.
Ide ederede blog. Mgbe, nem tudom, nem tudom, cheta ihe, nem. Chee echiche ịde ederede blog dị ka mkparịta ụka na ma ọ bụ edegara otu onye ede akwụkwọ ozi.
Ide ederede weebụ. Mgbe ị na-ede ebe obibi gị, banyere ibe, ibe ịkpọtụrụ, FAQ, wdg, chee echiche banyere onye ị chọrọ ịhụ n’ebe ahụ na otu wewere ike isi zaa ajụjụ ha wee mátayaiteiteọiteiteite weiteiteiteiteiteite.
Ghọta ọdịnaya ọzọ. Ndị na-eleta anya gị ga – ahọrọ ige nt na podcast, ụmhe ọmụma, ma ọ bụ ibudata eBook? Olee isiokwu ndị ha ga-achọta kacha nyere más néven ma dị mkpa? Onye gị ga – enyere gị, más néven ịchọpụta.
Iwuli ndị na-ege gị ntị. A helyszínen van nap, gi, még nem vagyok ism iyi nke netbọk mgbasa ozi ọha na eze kwesịrị ịdị na ya, blfgd ndị ha na-agbaso na, were ike post the ndị ọbịa na, ihe ọmụma nke oz ị bi ha bi ị ị ị.
Na usoro ahia gị niile, ịmalite site na onye gị ga-enyere gị aka ịkwado ndị na-ege gị ntị ma nweta nsonaazụ dị mma.